ललितपुरका जंगलमा दुगडको गुण्डागर्दी, एलपी ट्रकमा किन राखे ट्रिपरको इञ्जिन ? – मुलधार न्युज
Home > अर्थ/बजार > ललितपुरका जंगलमा दुगडको गुण्डागर्दी, एलपी ट्रकमा किन राखे ट्रिपरको इञ्जिन ?
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार १०:२७
काठमाण्डौ –कालोबजारीको अभियोग लाग्दै आएका केएल दुगड समुहले राज्यको नियम कानुन उल्लंघन गरी सार्वजनिक बन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको छ । दुगडका कारण बनक्षेत्र संकटमा परेको छ ।
धादिङमा यूनाईटेड सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका दुगडले ललितपुर स्थित नल्लुखोलाबाट अबैध रुपमा चुनढुंगा ओसारीरहेको स्थानीयले बताएका छन् । केही व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएको तथा खरिद गरेको नाटक गर्दै चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको दुगडले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हो ।
उता गोदावरी नगरपालिका वडा नं। ८ को डुकुछापमा वडाध्यक्षले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेर बालुवाखानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षले सञ्चालन गरेको साईनिङ वालुवा खानी सार्वजनिक जग्गामा रहेको स्थानीयको दावी छ । स्रोत भन्छ,‘वडा अध्यक्षको साइनिङ बालुवा खानीले झण्डै २५ रोपनी भन्दा बढि सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ ।’
एसएसपी रवीन्द्र धानुकले अबैध क्रसर र ढुंगाखानीमाथी निगरानी बढाउन थालेका छन् । उनले ललितपूरको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै आफू मातहतलाई कुनै पनि गैर कानूनी धन्दा मा संलग्न भएको पाइए सशक्त कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अवैध ढुंगाखानीसँग साँठगाँठ गर्दै आएको सूचना पाएपछि एसएसपी धानुकले चाँपागाँउ बृत्तका डिएसपीलाई सच्चिन वा कारवाहीको भागिदार बन्न तयार रहनु भन्दै चेतावनी दिएको परिसर स्रोतले बतायो ।
सरकारले २०७३ सालदेखि नै क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमति रोक्का गरेको छ । खानीको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासनअनुसार साविकको जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार दिइएको थियो ।मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि उक्त अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई हुने व्यवस्था गरिएता पनि स्थानीय सरकारले त्यसको विरोध गरेको थियो । कसको मातहत हुने भन्ने कुरा तय भई नसकेको बेला नगरपालिका प्रमुखले मापदण्ड मिचेर अवैध उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
नागरिकको खाताको रुपैयाँ लुटिएको छैनः राष्ट्र बैंक